RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Si Rasmi Ah U Dhamaystirtay Heshiiska Goolhayihii Athletic Bilbao Ee Kepa Arrizabalaga Oo Ay Rekood Cusub Suuqa Ugu Dhigtay. - GOOL24.NET
RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Si Rasmi Ah U Dhamaystirtay Heshiiska Goolhayihii Athletic Bilbao Ee Kepa Arrizabalaga Oo Ay Rekood Cusub Suuqa Ugu Dhigtay.
Kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa goolhayihii kooxda Atheltic Bilbao ee Kepa Arrizabalaga kadib markii ay Courtois ka iibisay Real Madrid. Chelsea ayaa dhamaystirtay saxiixa goolhaye Kepa Arrizabalaga kaas noqday goolhayihii abid ugu qaalisanaa isaga oo rekoodhkan kala wareegay Alisson Becker oo ay Liverpool hore ugala soo wareegtay AS Roma.
Chelsea ayaa soo bixisay lacagta lagu burburin karayay heshiiska Kepa Arrizabalaga ee kooxdiisii hore ee Bilbao kaas oo ah 80 milyan euros oo u dhiganta 71.8 milyan gini iyada oo hore Alisson uu 67 milyan gini ugu soo biiray Liverpool.
Kadib markii uu Courtois iska diiday in uu tababarka kooxdiisii hore ee Chelsea uu qaato isla markaana ay heshiiskiisa 12 bilood oo kaliyi ka hadhsanayd waxay maamulka Chelsea go’aan ku gaadheen in halkii uu isaga oo xor ka bixi lahaa dhamaadka xili ciyaareedkan cusub in ay lacag kala soo baxaan si ay Kepa ula soo saxiixdaan.
War saxaafadeed ay Chelsea ku shaacisay heshiiska rekoodhka aduunka ah ee ay kula soo wareegtay goolhaye Kepa ayaa lagu bilaabay: “Kooxda kubbada cagta Chelsea waxay ku faraxsan tahay ku dhawaaqista saxiixa Kepa Arrizabalaga oo ay kala soo wareegtay Athletic Bilbao”.
Waxaana qoraalka oo sii socda lagu yidhi: “Goolhayahan caalamiga ah ee 23 sano jirka ah ee ree Spain waxa uu soo gaadhay ka hor xili ciyaareedka cusb ee Premier League isaga oo saxiixay uu todoba sano ku joogi doono Stamford Bridge”.
Goolhaye Kepa oo ah goolhaye da’yar ah isla markaana hibo wayn u leh shaqadiisa goolhaye ayaa hore heshiis buuxa ula gaadhay kooxda Real Madrid waxaana la filayay in bishii January ee horaantii sanadkan ay kula wareegi kartay 20 milyan euros oo kaliya oo markaas heshiiskiisa lagu burburin karayay.
Laakiin Zidane ayaa kalsooni buuxda u muuiyay Keylor Navas taas oo keentay in kooxda Athletic Bilbao ay fursadan si wayn uga faa’iidaysatay waxayna markaas Kepa ka saxiixatay qandaraas cusub oo dhacayay 2025 kaas oo lagu burburin karayay 80 milyan euros taas oo hadda Blues ku qasabtay in ay bixiso 60 milyan euros oo dheeraad ah intii ay Real Madrid bishii January 2018 ay ka bixin kartay Kepa.
Kepa Arrizabalaga ayaa ahaa goolhayaha koowaad ee kooxda Athletic Bilbao wuxuuna soo muujiyay tayadiisa isaga oo soo ciyaaray inka badan 100 kulan oo horyaalka La Liga ah laakiin lacagta rekoodhka aduunka ah iyo in uu Premier league ku cusub yahay ayay dadka qaar ku tilmaameen in heshiiska Kepa Arrizabalaga ee Chelsea uu yahay khamaar wayn.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladii xumayd ee ay Chelsea ku jirtay maalmihii la soo dhaafay ayaa si rasmi ah u soo dhamaaday kadib markii uu Courtois isla caawa ku biiray Real Madrid isla markaana ay hadda Chelsea dhamaystirtay saxiixa goolhaye Kepa Arrizabalaga.